Xogta - Iskaashiga Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Jaantusyada Hantida Guriyeynta ee JANUARY (HIC) iyo WAQTIGII WAQTIGA (PIT) COUNTS ama HIC / PIT
Sanadkasta inta lagu gudajiray maalmihii ugu dambeeyay ee 10 ee Janaayo, Socoto Daryeel Kasta (CoC) ee guud ahaan ummada waxay qaadataa hal sawir oo hal habeen oo dhan ah oo loogu talagay (ama xadidan) si loogu adeegsado dadka ay la kulmaan hoy la’aan (HIC) iyo tirada dadka la kulmay. hoy la’aan (PIT). Waa kuwan nambarada Gobolka Pima.
[XUSUUSNOW: Bandhigga HIC PIT waa PowerPoint oo soo koobaya natiijooyinka. Labada warbixin ee soosocda waa lambarada loo gudbiyay HUD. Midda koowaad waa macnaha guud, labada kalena xog gaar ah.]
Tirada dadka bilaa hoyga ah ee bulsho walba badiyaa hoos ayey u dhacdaa sanadka oo dhan. Si loo soo bandhigo dhammaystiran oo hoyla'aan ah, mid kasta oo ka mid ah CoC ayaa sannad kasta soo gudbisa sawirro saddex-biloodle ah oo ka mid ah tirooyinka guri-la'aanta ah ee ka dhex jira bulshada. Tan waxaa loo yaqaanaa data Falanqeynta Nidaamyada Longitudinal (LSA) waxaana loosoosaaray Warbixinta Qiimeynta Guri la'aanta ee Sannadlaha ah (AHAR). Hoos waxaa ku yaal warbixinnada TPCH ee lambarrada hoylaaweyaasha ee Pima County.
[XUSUUS: Warbixinta 2018 LSA ama AHAR Report wali lama soo gudbin]
Cabbirka Waxqabadka Nidaamka (SysPM) wuxuu muujiyaa horumarka ay bulsho u sameyso soo afjaridda hoy la'aanta. Lixda tallaabo ee hada la soo sheegey waa: celceliska dhererka waqtiga ee dadku ay hoy la'aan yihiin; boqolkiiba inta dadka qaata caawinta guryeynta ee CoC ay dib ugu noqdaan hoy la’aan; tirada dadka bilaa hoyga ah; ilaa xadka dadka ku jira guryaha CoC ay helaan shaqo ayna kordhiyaan dakhliga; iyo sida ay ugu guuleysteen dadaalladeenna wacyigelinta ee ah dejinta dadka ee guri rasmi ah iyo ka caawinta inay sii wadaan